साईवर फिडब्याकमा दुई हस्ति - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
डाक्टर गोविन्द केसी र प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकता जन्ममिति फरक परेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टीका–टिप्पणी गरिए । प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको जन्म मिति पाँच प्रकारको फेला परेको छ । त्यसैगरी आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठेपछि डा. केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो नागरिकता सार्वजनिक गरेका छन् । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाली कागजमा भएको, त्यसलाई पट्याएर राख्दा बिग्रिएपछि अर्को प्रतिलिपि निकालेको केसीको दावी छ । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका केही टिप्पणी :
यो उमेर भएका जागिरदार कुनचाहिँको उमेर फरक–फरक नहोला र ? स्कुलमा माड्साबले राखिदिने हो । घरको चिनामा अर्कै हुन्छ । नागरिकता दिने बेलामा जन्म मितिको सट्टा उमेर मात्रा लेखिने, कतै नखोज्ने कारणले आफूलाई मन लागेको जन्म मिति राखिन्थ्यो । यस्तै हुँदा कतिले पछि सच्याएर फाइदा पनि उठाए । जब लोभ, लालच, जालझेलको मात्र बढ्दै गयो तब मात्र नक्कली र सक्कली खोजिन थाल्यो, त्यो पनि प्रतिद्वन्द्वीबाट । यस्तो अवस्थामा कुन जन्म मितिलाई मान्यता दिने भन्ने विधि लागू भैसकेको छ । कुन नियतले कहिले उमेर सच्याएको भन्ने मात्र हो । यसमा हेरिनुपर्ने चाहिं नियत हो ।
अर्काको शरीरमा जुम्रा उक्लिएको देख्ने आफ्नो शरीरमा भैंसी उक्लिएको नदेख्ने माफिया रै’छन् यी बूढा ।
अब केही काम नपाएपछि नागरिकता र सर्टिफिकेट चेक गर्दै हिंड्न थाले जस्तो छ । कठै मिडिया †
गोपाल पराजुलीले झैं धेरै समय जागिर खान र पदमा बहाली रहन नियतवश यसो गरेको हो कि अरू कुनै कारणले हो, यो पनि खुट्याउनुपर्‍यो ।
डा. केसीसँग एउटा मात्र नागरिकता छ, तीनवटा छैन । उनको त्रुटि फारम भर्दा भएको छ । त्यो त्रुटि कारबाहीको भागीदार हुन्छ भने कानुनअनुसार गरे भो । उनले ‘कथाले मागेअनुसार’ मौका छोपी–छोपी उमेर घटबढ गरेर जागिरको म्याद बढाएका छैनन् ।
मेरो नागरिकता, एसएलसी र त्रिविका प्रमाणपत्रका नाम र जन्म मितिमा कुरा सामन्जस्य छैन, तर म जन्मभन्दा डेढ वर्ष जेठो भएर अवकाश स्विकार्छु । किर्ते र त्यतिबेलाको स्कुलले गरेको गल्तीबीच फरक छुट्याउन के खानुपर्छ ?
डा. गोविन्द केसी र गोपाल पराजुलीको जन्ममितिवाला लफडा एउटै हुँदै होइन । केसीको नागरिकता एउटै छ र अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक छ । जुन कुरामा अनुसन्धान गर्न र अवाञ्छित देखिए कारबाही भोग्न तयार छन् । पराजुलीले आफैं तीन पटक नागरिकतामा उमेर घटबढ गराई त्यसबाट प्रस्ट फाइदा उठाएका छन् ।
आज नागरिकता, सर्टिफिकेट र मार्कसिट हेर्नुपर्‍यो । कतै जन्ममिति फरक पो छ कि ? भए त ठूलै मुन्छे भइन्थ्यो नि गाँठे !
ठूलो मान्छे बन्न तीन–चारवटा जन्म मिति हुनुपर्ने रै’छ । नागरिकता लगायत सम्पूर्ण सर्टिफिकेटमा एउटै मिति लेखिएछ । अब फेसबुक, ट्विटर, स्काइप आदिमा अलग–अलग जन्ममिति बनाउनुपर्‍यो ।
दिनभर जन्मदर्ता, एसएलसीका प्रमाणपत्र, प्लस टु का प्रमाणपत्र, स्नातकको प्रमाणपत्र, नागरिकता, लाइसेन्स इत्यादि सबै चेक गरें । सबैमा जन्ममिति एउटै रहेछ । किन प्रगति नभएको, बल्ल था’ पाएँ ।
प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि त्रुटि देखाउँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग्ने डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नै विभिन्न प्रमाणपत्रपिच्छे फरक जन्ममिति रहेको हेरेनन् । आफ्नै नैतिकतामाथि प्रश्न खडा हुन पुग्यो । अरूको भन्दा नि आफ्नो सच्याउनतिर लाग्नुहोला ।
नेपाल आमाकी छोरी